Biyya Arabaa, Ruuzii fi Oromoo -
Biyya Arabaa, Ruuzii fi Oromoo
Dursee iccitii tokkon isinitti himaa dabarsitanii ormatti hin himinaa. Iccitichi kunooti: Ani Facebook fayyadamuu hedduun jaalladha. Maaliif yoo jettan sababa lamaafi. Tokkoffaa, Afaan Oromoo barreeffamee argamu hedduminaan Facebook irratti malee bakka biraatti hin argadhu. Lammaffaa, lammii Oromoo hedduu Facebook irratti malee bakka biraa kanaan itti arguu danda’u hin beeku. Sababni kunneen gahaa miti yoo jettan kan biraa isiniifan dabala.
Gara ijoo dubbiittan deebi’a. Maal akka ta’e hiraanfattan yoo ta’e, waa’ee Biiya Arabaa, ruuzii fi lammii Orimooti. Darbee darbee lammiiwwan Oromoo Biyya Arabaa jiraatan “jara Biyya Arabaa jiraatanii ruuzii quufan” maqaa jedhutu itti kennama. Kun dogoggora daangaa hin qabne ta’ee natti muldhata. Ani Biyya Arabaa hin jiraadhu, garuu ruuzii ittoo mi’ooftuu wajjin yoon argadhe, hamma handhuurri koo bakka dhokattee dhiibamtee as baatuttan nyaadha. Gaaf gaaf, shamizii koo urtee ifatti bawuu yaalti. Kanaaf nama arrabsuu barbaaddan, anas dabalatee, waan feetaniin arrabsaa malee ruuzii koo na duraa hin tuqinaa. Maal waansaa, mee natti himaa: nyaachuun quufuuf edda hin taanee beela’uufii?
Gama biraatiin akaakuun nyaataa hedduun otuu jiruu maaliif ruuziin koo kophaatti baafamtee arrabfamti? Maaliif warra biddena nyaatu, foon dheedhii nyaatu, bargarii nyaatu, otongora nyaatu, marqaa nyaatu hin arrabsine? Arrabsoon erga hin hafnee jechuu kooti. Ruuziin maal balleessite? Irraa bu’aa.
Oromoo nyaataan qoqqooduun kun yookaan wal’aalummaarraa madda, yookaan gochaa diinni ummata Oromoo addaan qooduuf hojjetu ta’uun isaa hubatamuu qaba.
Waa’ee lammiiwwan Biyya Arabaa jiraatanii waa xinnoo dubbadheen xumura. Hiriyoota Biyya Arabaa jiraatan hedduun qaba. Akkuma nama hundaa ija lama, miilla lama qabu. Gaafaaf eegee hin qabani. Maatii qabu, hawwii qabu. Hawwiin isaanii kan kootiif kan keessan irra adda miti. Biyya akka lubbuu isaanii jaallatan qabu, garuu gidiraatu irraa deemsise. Hedduun isaanii halkaniif guyyaa boqonnaa tokko malee hojjetu. Ofiif maatii isaanii jiraachisuuf jedhaniiti. Mirga ummata Oromoo dhugoomsuufis waan dandeettii isaanii gumaachaa jiru. Kanaaf, jaalalaaf kabaja guddaa argachuu qabu malee arrabsamuu hin qabani. Lammiiwwan Biyya Arabaa jiraatan irraas bu’aa.
Previous Waamicha Diddaa Master Pilaani-Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa
Next OLF to join hands with TPDM and G7??